जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग १) – Word of Truth, Nepal
आफ्नै समझमा भरोसा गर्ने व्यक्तिले आफ्नो पाप स्वभावको कारणले गलत निर्णयहरू गर्न पुग्‍छ। हाम्रा आँखा परमेश्वरमाथि लगाइरहनैपर्छ र हृदयदेखि उहाँमाथि नै भरोसा गर्नुपर्छ। यद्यपि विश्वासीभित्र एउटा “नयाँ मान्छे” अर्थात् नयाँ स्वभाव हुन्छ, उसभित्र “पुरानो मान्छे” पनि अझै हुन्छ जसले उसलाई बाटोदेखि भड्काउन सक्छ।
परमेश्वरलाई आफ्ना सबै मार्गमा मान्ने काम प्रार्थनाद्वारा गरिन्छ। हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णयमा हाम्रो आफ्नै समझमा भरोसा राख्‍नुको सट्टा हामी बुद्धि र अगुवाइको निम्ति प्रभुसित विन्ती गर्दछौं। उहाँले आफ्ना जनहरूलाई अगुवाइ गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको त छ तर हामीले उहाँको अगुवाइ खोज्नुपर्छ; अगुवाइ त्यत्तिकै पाइन्छ भनेर ठान्नुहुँदैन। हामीले आफ्ना सबै मार्गहरूमा “उहाँलाई मान्नुपर्छ”। यस्तो विचार आउन सजिलो छ, “मलाई उहाँको बुद्धि र सहायता चाहिन्छ भनेर प्रभुलाई त थाहै छ; अवश्य पनि उहाँले मलाई त्यो दिनुहुन्छ।” तर वास्तवमा, परमेश्वरले हामीलाई सबै कामकुरामा तोकेर, यत्‍नसित प्रार्थना गर्न भनी बाइबलमा सिकाउनुभएको छ। त्यसो गर्न विफल हुनु भनेको बुद्धिहीन निर्णय गर्न पुग्‍नु हो।
सरल भाषामा भन्ने हो भने बुद्धिमानी निर्णयहरू गर्नु भनेको बाइबलअनुसार निर्णय गर्नु हो। येशूले यसलाई “मेरो वचनमा लागिरहने” कामको रूपमा बयान गर्नुभयो। बाइबलको अवज्ञा गर्न लाउने कुनै पनि निर्णय परमेश्वरको इच्छाविपरित हुन्छ। यसमा अपवाद छैन।
“सात कक्षा पार गरेको केही समयपछि हो, हाम्रा करिब २०% युवाहरू हराउँछन्। सङ्गतिको दिनमा छुट्टि नपाइने किसिमको काम अँगालेकाले तिनीहरू हराउँछन्। ती काममा लागेपछि उनीहरूलाई सङ्गति नआउनलाई बाहाना गर्नु सजिलो हुन्छ र उनीहरू प्रायः आउँदैनन् पनि।”
“मण्डली छोडेर जानेहरूमध्येमा धेरैजनाको यस्तो धारणा भएको पाइएको छ कि यदि परमेश्वरले उनीहरूलाई सङ्गतिको दिनमा छुट्टि नपाइने काम दिलाउनुभएको छ भने सङ्गति छुटाउनु गलत होइन। परमेश्वरले उनीहरूलाई अभद्र पोशाक पहिरनुपर्ने काम दिलाउनुभएको छ भने अभद्र पोशाक पहिरनु गलत होइन। परमेश्वरले उनीहरूलाई रक सङ्गीत सुन्नुपर्ने वातावरण भएको काम दिनुभयो भने त्यो गलत होइन। त्यस्ता कुराको सामना गर्नलाई आफूहरू बलियै भएको उनीहरू ठान्दछन् र उनीहरू त्यसबाट अलिकति पनि प्रभावित नभईकन मण्डली आइरहन सक्नेछन् भन्ने उनीहरू सोच्छन्। तर प्रायः त्यस्तो काम पाएको छ महिना जति पछि उनीहरू वर्षभरिमा ५०% वा त्यसभन्दा बढी सभाहरूमा गयल भएको पाइन्छ। अविवाहितहरूको निर्देशकको हैसियतले मैले एउटा कुरा जोड दिँदै आएको छु कि हाम्रो लागि ठ्याक्कै मिल्ने काम परमेश्वरले हाम्रो लागि रोज्नुभएको छ र शैतालने पनि हाम्रो लागि उसले रोजेको ठ्याक्कै मिल्ने काम पनि त्यहाँ छ। तर धेरैजसो युवाहरू परमेश्वरबाटको त्यो सिद्ध काम पाउनको लागि पर्खने गर्दैनन्।”
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-03 19:56:072020-11-13 16:20:53जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू कसरी गर्ने? (भाग १)
परमेश्वरको इच्छा कसरी जान्न...जीवनमा बुद्धिमानी निर्णयहरू...